शीतलहर के हाे यसबाट कसरी बच्ने ? - Maxon Khabar
Home / News / शीतलहर के हाे यसबाट कसरी बच्ने ?
शीतलहर के हाे यसबाट कसरी बच्ने ?
२०७६ पुष १३ - हाल नेपालका अधिकांस स्थानकाे तापक्रम ज्यादै न्युन भएकाे छ । तापक्रम कम भएपछी जाडाे तथा शितलहररले कैयाैकाे ज्यान समेत गएकाे छ । जाडाे याममा हावामा पानीको मात्रा मिलेर गह्रौं हुने हुँदा पृथ्वीको सतहमै जमेर बसिदिने गर्छ । जुन धुवाँ जस्तो हुने गर्दछ ।
जसलाइ साधारण भाषाामा कुहिरो भनिन्छ । त्यो सँगै चिसो हावा चल्न थालेपछि त्यसलाई शीतलहरर भन्ने गरिन्छ । शीतलहर नेपालको चुरे पर्वत भन्दा दक्षिणको भागमा हुने गरेको छ । पुस र माघ महिनामा चिसो बढ्ने भएपनी यसवर्ष पुषको पहिलो साताबाट नै तराईका बिभिन्न जिल्लामा चिसो शुरु भएको छ । कुहिरो र शीतसँगै चल्ने चिसो हावाका कारण स्थानीयको दैनिकी मा असर परेकाे छ ।
बजार तथा कार्यालयहरुमा सर्वसाधारणको उपस्थिति घटेको छ । खुला स्थानमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, रिक्सा र ठेला चालकहरु चिसोका कारण बढी प्रभावित छन् । सर्वसाधरणको भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा समेत चिसोले गर्दा सेवाग्रहीको संख्या पातलिएको छ । चिसो बढेका कारण रुघाखोकी, भाइरल फिभर, कोल्ड डायरियाका विरामी अस्पतालमा उपचारका लागि थुप्रीरहेका छन । चिसोबाट बच्नका लागि शरीरलाई तातो राख्नुपर्छ, त्यसको नाममा बन्द कोठामा हिटर, आगो बालेर ताप्नु हुन्न । झ्याल खोलेर हावा ओहोरदोहोर गर्न दिनुपर्छ,’ डाक्टर भन्छन, ‘ चिसो छ भनेर पानी कम खाने बानी हुन्छ, त्यसो गरेमा डिहाईड्रेसन हुने संभावना हुन्छ, पानी पर्याप्त पिउनुपर्छ, गर्मी मौसममा जस्तै जुस, फलफुल खानुपर्छ ।’